China CNC Milling factory na ndị nrụpụta | Ebute ụzọ
Igwe igwe nwere ọtụtụ uru karịa usoro nrụpụta ndị ọzọ. Ọ bara uru maka obere ọsọ. Ọdịdị dị mgbagwoju anya na nnabata akụkụ dị elu nwere ike. Ezigbo ire nwere ike nweta.
Igwe igwe nwere ọtụtụ uru karịa usoro nrụpụta ndị ọzọ. Ọ bara uru maka obere ọsọ. Ọdịdị dị mgbagwoju anya na nnabata akụkụ dị elu nwere ike. Ezigbo ire nwere ike nweta. Igwe ọka CNC nwere ike ịmepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị 2D ma ọ bụ 3D ọ bụla ma ọ bụrụhaala na ngwaọrụ ndị na-agbanwe agbanwe nwere ike iru ihe a ga-ewepụ. Ihe omuma atu nke akuku gunyere ihe ndi injinia, ihe ndi eji ebu ihe, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, wdg.
Kọmputa Nọmba Na-achịkwa (CNC) Milling bụ usoro nhazi nke ejiri rụọ ọrụ na mmanụ na Gas Industries. Igwe CNC na-eji ngwá ọrụ na-atụgharị ihe yiri nke egwu egwu, ihe dị iche bụ na e nwere onye na-agagharị agagharị nke na-agagharị na anyụike dị iche iche na -emepụta ọtụtụ ụdị nwere ike ịgụnye oghere na oghere. Ọ bụ ụdị nkịtị nke Computer Number Control Machining dị ka ọ na-arụ ọrụ nke ma mkpọpu ala ma na-agbanye igwe. Ọ bụ kacha ụzọ nke na-nkenke mkpọpu ala maka ụdị nile nke àgwà ihe na-emepụta na ngwaahịa maka azụmahịa gị.
Ọdịiche Dị n'etiti CNC Milling na CNC Turning
CNC Milling na CNC Turning na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta usoro ma gbakwunye nkọwa nke ọla na-agaghị ekwe omume iji aka mee. CNC Milling na-eji iwu, Koodu etinyegoro na kọmpụta ahụ ma tinye ya ka ọ gbaa ọsọ. Ihe igwe ihe na-akụzi ma na-atụgharị anyụike iji belata ihe dị na kọmputa. Ihe omume kọmputa na-enye ohere igwe iji mee ka ọ belata, ndị ọrụ nwere ike iji aka ha mechie CNC Machines iji belata ma ọ bụ mee ka usoro a dị ngwa.
N'ụzọ dị iche, CNC Turning na-eji igwe na-achịkwa kọmputa iji mepụta ngwaahịa ikpeazụ dị iche. Usoro a na-eji otu ihe eji egbutu oge iji tinye ihe yiri ya ka ịkpụ. A na-agbanwe ihe ndị a na-agbanwe agbanwe na ngwa ọrụ ahụ na-agagharị iji mepụta ọnụọgụ na oke nha. A na-eji ya kee okirikiri ma ọ bụ tubular mbak si ibu ihe mpempe. Ọ bụ usoro akpaaka na ọsọ ọsọ nwere ike ịbụ mmezi maka izi ezi karịa karịa iji aka gbanye lathe.
Zute igwe anyi
asatọ Okuma MA-40HA kwụ machining Centers (HMC)
anọ Fadal 4020 Vertical Machining Centers (VMC)
otu Okuman Genos M460-VE VMC kwadebere sistem mwepụ sistemụ yana ndị na-agbanwe ngwa ọrụ akpaka
Zute ikike anyị
Na-akpụzi: Dịka achọrọ gị
Ọnụọgụ ọnụọgụ: 2-1000mm n'obosara
Ihe: Aluminom, ígwè, igwe anaghị agba nchara, titanium, Brass, wdg
Ndidi: +/- 0.005mm
A nabatara OEM / ODM.
N'omume ndị dị tupu uka mmepụta
Ọrụ ndị ọzọ: CNC igwe, CNC agbanye, Ogwe igwe, Mpempe akwụkwọ metal, Emecha, Akụrụngwa, wdg
Nke gara aga: Industlọ ọrụ Ngwa
Osote: CNC agbanye